Ukuzilibazisa / ugqozi - Geofumed
Leisure / ugqozi
Imibono nemibono yomlobi we-geofumadas
Shiya i-Venezuela ngesikhathi sokungena
Ngicabanga ukuthi abanye bayazi isimo seVenezuela, ngithi abanye ngoba ngiyazi ukuthi i-Venezuela ayiyona indawo yomhlaba wonke, ngakho-ke kukhona abantu abangazi ukuthi liphi. Abaningi kulabo abangifundela, bazizwa futhi bahlupheke isimo ngaphandle, bambalwa bakholelwa ukuthi bayazi ukuthi kwenzekani, benza izigwebo ...
Leisure / ugqozi, Ezombusazwe and Democracy
Shiya iVenezuela kuya eColombia - I-odyssey yami
Wake wazizwa umzimba ngaphandle komphefumulo? Ngikuzwile kungekudala. Umzimba uba yinkimbinkimbi yokuthi uzizwa nje ukuthi uyaphila ngoba iphefumula. Ngiyazi ukuthi kufanele kube nzima ukuqonda, futhi ngisho nangaphezulu lapho ngingakaze ngiziqhayise njengomuntu omuhle, ngigcwele ukuthula ngokomoya futhi ...
Izithombe ze-13 Zomlando womuntu osomabhizinisi
Unyaka we-2015 usuphelile. Ukugubha, sikulethela ezimbalwa izithombe zomlando ezisikhumbuza ukuthi isikhathi asidluli. I-LZ 129 Hindenburg, i-Zeppelin-uhlobo lwezindiza, elibhujiswa umlilo lapho i-6 1937 e-36 ifika eNew Jersey. Ingozi yabangela ukufa kwe-XNUMX ...
Ubunginiyela, Innovations, Leisure / ugqozi
izici 6 okufanele icatshangelwe Integration Registry - cadastre
Yenza Registry Land kanye Registry of Deeds ukusebenza ndawonye manje yezinselelo ezithakazelisayo iningi sesimanje sezimiso amalungelo endawo. Inkinga ivame ukufana, ngisho nokuya ngaphasi komongo wethu waseSpanishi. Ngakolunye uhlangothi, i-idealism ye ...
Ukuphefumulelwa - Amathrendi kumakghono we-GIS - ESRI UC ngosuku lokuqala
Ngo 2005 Kwakuqala ngqa ngaya ESRI Umsebenzisi lenkomfa, njalo endaweni efanayo: I Isikhungo sombuthano San Diego, nge amabhanela ezinkulu elenga amakhothamo angu ephasishi omude ekhanyayo. Ukulwa nama-Arabhu anezintshe ezinamathele namhlophe, amajazi amnyama ezwekazi lase-Afrika ngokumomotheka ...
ArcGIS-ESRI, Geospatial - GIS, Leisure / ugqozi
UPSOCL - Indawo okumele iphefumulelwe
I-interface yayo ilula, ngaphandle kwama-sidebars, ngaphandle kwezikhangiso, ifomu yosesho kanye nemenyu engabonakali enezigaba ezinhlanu. Kuyindawo yesimo sokukhuluma isi-Spanish i-UPSOCL, enikezelwe ukwabelana ngezinto ezibalulekile emhlabeni. Izinto ezikhuthazayo, izinto ezithandekayo, nezinto okufanele zibonwe. Yakho ...
Inthanethi kanye Amabhulogi, Leisure / ugqozi
Kwakunzima ukuqinisa abaphathi ngaleso sikhathi; ukuthi imishini okufanele ithengwe kumele ifakwe inshuwalense ngokulwa, ukulimala kanye nezingozi. Kuyaqondakala okokuqala, ngemibuzo efana nale: Uma ithimba lizokunikela kamuva kumasipala, kungani bengakhokheli kangcono umshwalense? Ngokumelene nobugebengu? Ingabe lokhu akunikezi amathuba ...
Cishe incwadi yokugcina eya kubambisene bami ... angizange ngihambe
Ngamanje nje ezinsukwini eziyishumi ezedlule, njengoba wazi, ngiyekile ukusayina amaphepha afana nephrojekthi engangihlala kuyo futhi ngiphefumulelwe iminyaka eyisikhombisa. Ngokuqinisekile bebelokhu balinde incazelo, ngoba bambalwa abantu abasondelene nabo ababazi izinsuku ezincane ngaphambili, nakuba bekuhlelwe kusukela ngosuku enginqume ngalo ...
... okwamanje ...
Ngesikhathi nje udaba lokushintsha isimo luqala ukuqala ... Ngihlanganyela nawe enye yokuhamba phambili engcono engiye ngayibona komunye wabeluleki bami. Njengoba bengingafuni ukukufaka e-mail evamile kanye neyesikhungo sokuthumelela (kukhona okunye okunye) Ngikhulume ukuthi: Ukuba yi-09: 30 ngosuku luka-28 ka-June ...
Ngingayisebenzisa yini izithombe ze-Google Earth ze-cadastre?
Emva komzuzwana wokuhleka okuhle nomngane waseDutch namuhla, ngisindisa ukufana phakathi kwenqubo ehola umdlavuza emqondweni wezokwelapha kanye nokuthandana kweGoogle Earth ngemikhawulo engafanele: Isigaba 1: Scread. Udokotela uya ensimini ngokuphendula isicelo somlinganiso womnikazi ...
cadastre, -Google Earth / Amamephu, Leisure / ugqozi
I-Vbookz, isidlali esihle somsindo se-iPad / iPhone / iPod
Izicelo zokufunda ngokuzwakalayo ziyashintsha indlela esithanda ngayo izincwadi, ngokungangabazeki. Ngokuyinhloko, ngihlale ngithanda ukuthakazelisa leli gama kanye namanothi ohlangothini ngencwadi yangempela, yeka futhi ufunde kancane ukuze ukhonjise inqubo enhle. Kodwa akuzange kwenzeke kimi ukuthi ukuhamba uhambo kungaba ...
Izikhathi ezibalulekile ze-4 emlandweni we-Geofumadas
- Kufanele sibe nebhulogi ... Umphathi wami (HM) uthe, ngokubuka kwakhe kunqanyuliwe kuleli zwe. Ngangizisola ngokungamazi ukuthi indoda ye-73 yeminyaka ikhulume ngaphambi kokukhononda kwami ​​kwenkani yokuthi kungani nginqamula i-intanethi kumasipala abenza isondlo se-cadastral. Ngaphezu kwalokho akusho ...
egeomates yami, Leisure / ugqozi
Ukuphinda ngisebenzise kabusha ngobusuku bami obunesizungu eGuatemala, nje manje ukuthi ngizoshiya lapho ngishiya okuthile ukuze ujabulise. Ngiyazi, akugcwalisani ukukhathazeka ngobuchwepheshe ... kodwa kukhona. Wayeyintombazane enhle enamehlo amnyama kanye nezinwele eziqondile emahlombe, izihlobo ezinelungelo labasebenzi besikole sokubhoda ...
Ukufakwa kwesici sezenhlalakahle kulezinqubo zokuqeqeshwa kwezobuchwepheshe
Leli sonto ngangikhuluma nomunye wabahlanganyeli bami, futhi senza umlando othile mayelana nezinwele ezimpunga ezithathile eminyakeni kulezi zinkambiso zokuthuthukiswa - imayini engaphezulu kuneyesekela ikhanda layo. Ngamchazela ukuthi ukuziphendukela kwemibhikisho yami yangenza kanjani ukuba ngiguqule emkhakheni wezobuciko ngiye ku-Engineering bese ngiya ...
Ukufundisa CAD / GIS, Leisure / ugqozi
Indlela yokuxhuma kwi-intanethi ezindaweni ezikude
Ngangihlale ngizibuza ukuthi ngingenzenjani uma ngifanele ngiyohlala edolobheni elincane, lapho ukufinyeleleka kokuxhumana esikujabulela kulo muzi kunciphile. Okuningi manje ukuthi izinto zethu zokuzilibazisa zokuxhumana ezaza nge-Inthanethi zisenza siqaphele kakhulu imilayezo emisha yeposi, izindaba kumanethiwekhi omphakathi ...
Leisure / ugqozi, travel
Eminyakeni engu-32 kamuva, uxhuma izintambo, imijikelezo eseduze
Uhambo lwamaholidi ehlobo lube ngaphezu kokukhululeka kokucindezeleka. Akukhona nje kuphela mina, bekuye wonke umndeni wami ohamba nami. Ngezinye izikhathi ukufaniswa ukuthi izintambo zixhuma, kubonakala sengathi zingokoqobo, ukuthi azikho isikhathi sokuzindla. Ukushisa kwehlobo ...
Kwezinguquko ezingezona ezobuchwepheshe
Ngiyesaba ukukubona futhi, ukusula i-state yesifunda lapho le ndaba ifika khona. Angazi uma kungaba ngaphezulu. Ngingabaza futhi ngiyenqaba ukwenza noma yini ebhubhisa okungenani ukuthi lokhu kuyigugu kimi. Ngemuva kokubona ukuthi ucabangani, ngiyajabula ukuba yingxenye yezindaba ezithinta ... ...